4 Myanmar Facebook (for andriod) မြန်မာဖောင့်မရှိတဲ့ ဖုန်းတွေမှာ မြန်မာလိုမြင်ရတဲ့ ဆောဝဲလေးပါ... ~ တော်ဝင်မင်းသားလေး(နည်းပညာ)
4 Myanmar Facebook (for andriod) မြန်မာဖောင့်မရှိတဲ့ ဖုန်းတွေမှာ မြန်မာလိုမြင်ရတဲ့ ဆောဝဲလေးပါ...
1:32 AM ဖုန်းဆော့ဝဲများ No comments
ဒီ Facebook ဆောဝဲလေးက andriod ဖုန်းမှ မြန်မာစာ မရှိတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ မြန်မာစာ အလွယ်တကူ
မြင်ရစေတဲ့ ဆောဝဲလေးပါ.....။မြန်မာဖောင့် မထည့်ထားတဲ့ ဖုန်းတွေမှာ အသုံးပြူရန် အဆင်ပြေစေဖို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်.....။ဒီဆောဝဲလေးကို ဖုန်းမှာ install ပြီး fb ကို သုံးကြည့်ပါ မြန်မာ ဖောင့်အကုန်မြင် ရပါပြီ....။စိတ်ဝင်စားရင် အောက်ကလင့်မှာ ဒေါင်းယူနိုင်ပါပြီ......။
ပြုပြင်ရင်းနဲ့ ရှေ့ဆက်နေမည် နေ့စဉ်နှင့်အမျှ မိမိအကြိုက်ကလေးများကိုသာရွေးချယ်တင်ပြသွားပါမည် အဆင်မပြေတာလေးများရှိပါက Chatbox သို့မဟုတ် presidentkoko007@gmail.com သို့ အီးမေးလ်ပေးပို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါကြောင်းဗျ.ရောက်လာသူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်.။
Visit To Other Site
Topics : Choose Categories android (10) Android games (12) Android games ငွေခိုးနည်း (3) android live wallpaper (2) Android Live Wallpaper.apk ရေးနည်း (1) Android ဖုန်းဆော့ဝဲ (282) Android-IOS-Window (5) Blogger Templates (3) Browser For Android (2) browser for pc (4) Dota map (2) E Book (13) E-Book (5) Facebook နည်းပညာများ (18) Firmwares တင်နည်းများ (6) Firmwares ပိုင်းဆိုင်ရာ (7) Flash နည်းပညာ (5) games (1) ios applications (7) ios games (2) IT နည်းပညာ Ebook (13) keygen (1) Knowledge for Facebook & G-mail (1) Knowledge For Android (8) knowledge For Android apk (7) Knowledge For Blogger (15) Knowledge For Computer (8) Knowledge for Facebook (14) Knowledge for Facebook. (10) Knowledge for G-mail (3) Knowledge for G-Mail -Facebook.. (1) Knowledge for G-Talk (4) Knowledge For Internet (15) Knowledge For Network (6) Knowledge For Phone (2) Knowledge For Web (6) Lock ပြန်ဖြုတ်နည်းများ (1) pattern lock နဲ့ google account ဖျက်နည်း (1) pc game (1) Phone-ပိုင်းဆိုင်ရာနည်းပညာ (2) Photo Shop ဆိုင်ရာ (3) Photo ပြုပြင်ရာဆော့ဝဲ (3) Portable (17) Recovery သွင်းနည်း (1) ROOT Softwares (18) screen lock ကိုဖြည်နည်း (1) Software (3) Virus ရေးနည်း (1) Virusသတ်နည်း (2) Window နည်းပညာ (30) Window အတွက် (7) ကွန်ပျူတာသွက်လက်စေသောဆော့ဝဲများ (1) ကွန်ပြူတာ Software (141) ကွန်ပြူတာ နည်းပညာ (13) ကွန်ပြူတာအဘိဓာန် (6) စာအုပ်စာပေ pdf (1) ဓမ္မအသံ (1) နည်းပညာ (3) နည်းပညာ ဗဟုသုတ (23) နည်းပညာဗဟုသုတ (2) ဖုန်း ROOT နည်း (41) ဖုန်းနည်းပညာများ (36) ဖုန်းဆော့ဝဲကလိနည်း (1) ဖုန်းဆော့ဝဲများ (14) ဘလော့အလှဆင်ဖို့ (68) ဘလော့အခြေံ (3) မြန်မာဂန္တ၀င်သီချင်းများ (2) သတင်း (1) ဟာသ (2) အွန်လိုင်း ဗဟုသုတ (2) ရေးသားနည်း E-book (1)
ဒီဇိုင်းလှလှ Myanmar Fonts 300 ကျော်ဒီမှာရပြီဗျာ
Connection မကောင်းတဲ့အချိန် Facebook သုံးချင်ရင်
WIndwo7မှာ Internet Explorer ဖြုတ်နည်း
ပိုက်ဆံပေးဝယ်ရတဲ့ 40 Top Paid Android Apps & Theme...
Memory Booster Full Version ပါ
Bagan Keyboard Pro v1.5 for Android
IDM နဲ့ ဒေါင်းလို့မရတဲ့ပြဿနာနဲ့ IDM ကိုအပြည့်အစြုံ...
ကိုယ့်ဖုန်းကနေ အခြားဖုန်းရဲ့ Phone Call, Contact L...
Frozin Keyboard ကလေး
Facebook က သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ email ကို သိချင်ရင်''
Tawea : Websites တိုင်းမှာ Facebook Chat သုံးမယ်။
APK ကို မြန်မာမှုပြုခြင်း အသေးစိတ်နှင့် Java ကို စတ...
ဖုန်းတွေမှာ မရှိမဖြစ်ထည့်သွင်းထားရမယ့် Softwareလေး...
အဆောက်အအုံ ဒီဇိုင်း တွေ ရေးဆွဲနိုင်မယ့် Google Ske...
အင်တာနက်မြန်နှုန်းမြှင့်ပေးမယ့် Ashampoo Internet A...
Firefox Browser တွင် Gmail, Facebook စသည့် Account...
Samsung GALAXY GRAND Duos GT – I9082 ကို Myanmar ဘ...
Huawei Themes လေးတွေကိုယ်တိုင်လုပ်ရအောင်နော်
Recent Posts စလိုက်လေးပြု လုပ်နည်း (1)
" အွန်လိုင်းပေါ် ပိုက်ဆံရှာချင်သူများ အတွက် အပိုင်း...
Chat4MM (myanmar font မရှိသော andriod ဖုန်းတွေအတ...
Karaoke CDG Creator Pro (ကာရာအိုကေ သီချင်းတွေ ကိုယ...
Facebook မှာ Friend များချင်လှ ပါသတဲ့ ဆိုတဲ့ ညီအစ်...
Website ပိုင်ရှင်များအတွက် MyanmarAds မှ ကြေငြာမျာ...
HWH ဥုံ Android Version Update နှင့် Windows Compu...
Loader Droid Pro 0.9.3 (Download Manager For Andro...
Windows7နှင့်ဆိုင်သော Windows7Password ကို res...
ဖုန်း Button သက်သာအောင်အထောက်အပံ့ပေးတဲ့ Applicatio...
Reported Attack Page အဖြစ် မိမိဆိုဒ် သတ်မှတ်ခံခဲ့ရ...
ကွန်ပျူတာပေါ်ကနေ skynet ၇ုပ်သံလိုင်းတွေကြည့်ရအောင်
G- talk မှာကိုယ်ကြုက်တဲ့လင့်တွေစာတွေကိုမှတ်ထားမယ်(...
ဆက်နေတဲ့ DVD သီချင်းနဲ့ဇာတ်ကားတွေကို အပိုင်းပိုင်း...
MRTV LIVE နှင့် MWD LIVE တို့ကို ဖုန်းထဲကနေ အဆင်ြေ...
ကိုယ်ရူးတယ်လို့ပြောချင်ပြောပါ ဖေးစ်ဘုတ်ပေါ်က ဟာသလေး...
Android apk ရေးသားနည်းစာအုပ် Part-1-2 တွေလာပြီဗျာ
ဘလော့မှာ တင်ထားသမျှပိုစ် အားလုံး တနေရာထဲကနေ ရှာဖွေ...
မိမိတို့ချစ်သူ gmail.comအကောင့်ထဲကို ၀င်လာသမျှ မေး...
ဘလော့မှာ အဖြူရောင်သံဇဉ်ရေဒီယိုထည့်နည်း( For Only B...
fire fox နဲ.အင်တာနတ်ကိုခပ်မြန်မြန်လေးသုံးကြစို.
Myanmar Website Directory apk လေးပါ
IT SuBoo: မြန်မာရေဒီယို၊နှင့် တစ်ကမ္ဘာလုံးမှရေဒီယို...
ကိုယ့်ဆိုဒ်ကို Googleမှာရှာလို့ရအောင် လုပ်ချင်ရင်
Social Slideout Widget လေးထည့်နည်း
Firefox အသုံးပြုရင်း စက်လေးသွားပါတယ်ဆိုသူများအတွက်...
Gtalk, facebook ,Skype တွေကို တစ်နေရာတည်းမှာချက်နိ...
ဘီယာဗူးခွံ ( သို့ ) Code ဗူးခွံ ကိုအသုံးပြုပြီး Wi...
ကျနော်အမြဲသုံးတဲ့ Phone Recorder လေးပါ
Android ဖုန်းတွေကို ထောင်ဖောက်မယ်
Automatic Call Recorder Pro 3.53 ဖုန်းစကားပြော တဲ့...
Facebook Lock ကျပြီး ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ Code တောင်းနည်...
1G, 2G, 3G, 4G (LTE), GSM နဲ့ CDMA တို့ရဲ့ကွာခြားခ...
ဖုန်းတွင် အင်တာနက်လိုင်း ကျရသည့် အကြောင်း ၂ ချက်
TV မှ မြ၀တီလိုင်းကို android ဖုန်းပေါ်တွင်တိုက်ရိုက...
ပိဋကတ် သုံးပုံ မြန်မာပြန် (Tripitaka for Android)
မြန်မာစာလုံးပေါင်းသတ်ပုံကျမ်း နှင့် ခွဲထား PDF
အင်တာနက်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ ကမ္ဘာလုံးက ရုပ်သံတွေကို...
Wondershare Dr.Fone for iOS 3.0.0.88 For Win8/7/Vi...
Android ဖုန်းတွေအတွက် Battery စောင့်ကြည့်ရေး Apk တ...
PhoneLocator (Android) 2.7
ကွန်ပျူတာ အသံတိုးနေသလား ? (LetaSoft SoundBooster v...
Golden Call Locator v1.0.0.2 for Android
Screen Saver လေးတွေ ကိုယ်တိုင် လုပ်ကြမယ်
Format Factory နဲ့ Mp3 ချုံ့နည်း၊ ဖြတ်နည်း
4 Myanmar Facebook (for andriod) မြန်မာဖောင့်မရှိတ...
ကိုဘလော့မှာအခြားBlogger ကို ADMIN ထည့်နည်း ဖြုတ်နည...
Blogger တို့အတွက် Free Template အကောင်းဆုံးတွေ ရှိ...
မြ၀တီရုပ်မြင်သံကြားနှင့်MRTV4 Channel အား ကွန်ပျူတ...
Viber : Free Messages & Calls 3.0.2.5 Apk 11MB
MRTV LIVE နှင့် MWD LIVE တို့ကို ဖုန်းထဲကနေ အဆင်ပြေပြေကြည့်ကြရအောင်
MRTV LIVE နှင့် MWD LIVE တို့ကို ဖုန်းထဲကနေ အဆင်ပြေပြေကြည့်လို့ရမယ့်နည်းလေးလာပါပြီ။ လိုအပ်တဲ့ ဆော့ဝဲံလေးကိုတော့ ဒီမှာ ဒေါင်းလိုက်ပါ။ ဒီမှာ...
အခုတင်ပြမည့် ပိဋကတ် ၃ပုံ မြန်မာပြန် စာအုပ်များသည် ရှင်းလင်း၊ သေသပ်ကာ ဖတ်ရလွယ်ပါသည်။ အားလုံး ၄၅ အုပ် (48 MB) ပဲရှိပတယ်။ Download ရယူကာ သိမ်...
Gpk ဂိမ်းဖိုင်ပြုလုပ်နည်း နှင့် Android Games GPK ဖိုင်များ Install လုပ်နည်း
Gpk ဂိမ်းဖိုင်ပြုလုပ်နည်း အဟဒီလိုကောင်းတဲ့နည်းပညာတွေကို ဖြစ်နိုင်ရင် အကုန်လုံးပေါင်းပြီး စာအုပ်တစ်အုပ်လုပ် လိုအပ်တဲ့ဖိုင်တွေ ပေါင်းစုပြီးေ...
Android ဖုန်းအတွက် နှစ် 100 မြန်မာပြက္ခဒိန် Version2လေးပါ
MmYear100 သည် Androidphone များ နှင့် tablet များတွင် အခမဲ့ အသုံးပြုနိုင်သော အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ နှစ်တစ်ရာပြက္ခဒိန် ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင်း ...
Viber မြန်မာဗားရှင်း ထွက်ပါပြီ
ကျနော် ဒီ Viber မြန်မာဗားရှင်းကို လွပ်လပ်ရေးဖခင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း မွေးနေ့ကို ရည်ဇူးပါတယ် ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ကွန်ပျူတာ အင်တာနက် ဖုံး စတဲ့ အ...
G-Talk မှာ Chat စရာမရှိလို့ပါအကောင့်လေးရှိရင်ပေးပါလာဗျ လို့ လာလာတောင်းနေကြလို့ တင်ပေးလိုက်ပြီနော်..Q ကြဗျာ အားရအောင်
အောက်မှာ G-Talk အကောင့်ပေါင်း (17013)ယောက် moekaungmalay222@gmail.com info.shwepoechee@gmail.com mhoneshweyi@gmail.com yekonaing11@gmail.co...
Viber အကြောင်းအခြားသူရဲ့ data တွေကို သူမသိအောင်ခိုးချင်ရင် (1)(2)ကို ပြီးအောင်ဖတ်ပေးပါခင်ဗျာ
မင်္ဂလာ နေ့ လေး တစ် နေ့ ကျရောက် လို့ လာပါ တယ်ခင် ဗျာ internet သုံး နေ သူ အ များ စု ဟာ Viber ကို လည်း အသုံး ပြု သူ များ လိမ့် မယ် လို ကျွန...
ကျနော့်ရဲ့ ငယ်ဆရာ ဦးအဂ္ဂ [တောင်ငူ]ရဲ့ The Best Questions စာအုပ်ကလေးပါ
ဒီစာအုပ်ကလေးက ကျနော့်ရဲ့ ငယ်ဆရာ ဦးအဂ္ဂ [တောင်ငူ]ရဲ့စာအုပ်ကလေးဖြစ်လို့ တင်ပေးလိုက်တာပါ.. စာအုပ်အမည်းThe Best Questions ရေးသားသူးဦး...
ဖုန်းထဲမှာ ကျားကွက်ရွေ့ကစားချင်သူတွေအတွက် ကျားကွက် apk
ဒါလေးကတော့ ဖုန်းထဲမှာတင်ကျားကွက် ရွေ့ကစားချင်သူတွေအတွက်ပါ။ ကျားထိုးဝါသနာပါတဲ့သူတွေ အတွက်တော့ အကြိုက်ပေါ့ဗျာ။ကဲ ကြိုက်တယ်ဆိုဒေါင်းသွားလိုက်ပါ...
Adobe Photoshop CS6 အသုံးပြုနည်း စာအုပ် နှင့် ဆောဝဲ
Cbox မှာသူငယ်ချင်းတယောက်က Adobe Photoshop CS6 အသုံးပြုနည်း စာအုပ် လိုချင်တယ် ဆိုလို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ တခြား အသုံးလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများ အလွယ...
အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ.. ဒီဆိုက်ကလေးကနေ့စဉ်နှင့်အမျှ ၊တွေ့ကြုံရတဲ့ နည်းပညာနှင့်၊ တစ်ခြားဗဟုသုတစာပေများကိုပြန်လည် ဖြန်ဝေပေးသွားမှာပါ..ဆိုတာသိစေချင်ပါတယ်..
Social Slideout Widget
Copyright © တော်ဝင်မင်းသားလေး(နည်းပညာ) | Powered by Blogger